Wasaaradda Howlaha guud DFS oo 1100 Dhalinyaro ah shaqaaleysiinaysa - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Wasaaradda Howlaha guud DFS oo 1100 Dhalinyaro ah shaqaaleysiinaysa
August 15, 2018 admin447
Wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska XFS, ayaa maanta daahfurtay mashruuc gobolada dalka Soomaaliya looga shaqaaleysiinayo in ka badan kun qof.
Mashruuca, ayaa waxaa ka faa’ iideysan doono ku dhawaad 1100 dhalinyaro ah oo la barayo xirfado ay ka mid yihiin dhismaha iyo kuwa kale oo muhiim ah, waxaana mashruuca wajigiisa koowaad lagu bilaabayaa 400 oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo ka kala imaanayo Magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, iyo Garoowe.
Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha XFS Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye iyo Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xaquuqul Insaanka XFS Marwo Deeqo Yaasiin, ayaa mashruuca ku guubaabiyey in lagu daro gabdhaha iyo wiilasha baahiyaha gaarka qabo iyo dhalinyarada kasoo laabtay tahriibka oo u baahan shaqo abuur.
Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada XFS Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa xusay in wax wanaagsan ay tahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradda,isaggoo xusay in taasi aysan ku xerneen Tirada badnaashaha.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Magaaladda Muqdisho Mudane C/raxmaan Cumar Cismaan Eng. Yariisoow, ayaa waxa uu xusay in dhalinyaradaan shaqo abuurka loo sameynayo uu yahay bilow wanaagsan, maadaama dalka uu mudo 30 sano ah ku jiray marxalad adag.
Hay’adaha UN-ka iyo dalalka deeq bixiyaasha, ayaa horay u maamuli jiray maareynta mashruucyada laga hirgeliyo dalka, waxaana ugu dambeyn Dawladda Soomaaliya ay ku guuleystay in dib loo soo celiyo ka go’aan qaadashada iyo maamulida mashruucyada dalka sida uu sheegay Wasiirka wasaaradda Howlaha Guud iyo dib udhiska XFS mudane Cabdifataax Ibraahin Axmed Geeseey.
Dagaal maalintii labaad ka socda koofurta gobolka Mudug
Safarka MD Farmaajo ee Hobyo (Sawirada Diyaargarowga)